TOP 5 ... Ireo Filohan'ny Repoblika malagasy. : comments » What if ...
Monday, November 3, 2008 - 14:19:26
ndrisy mantsy ry tapan-tsosisy fa tsy izay no nitranga. Quelques cons de moins raha izay tokoa no nitranga.
Fa maninona no hatramin’ny 10 septembre 2008 fotsiny?
Tsy ratsy ilay ravin-gadra à la sosy samoela :)
fa raha hanondranantsika labiera toy izany i alemana tsisy ho an’i simp tsony ndray :D
Monday, November 3, 2008 - 16:48:34
hihihi! izaho ary mitsiriritra mafy ilay hoe raha toa moa…what if fa hitanao ny revy sy ny lalana e
Monday, November 3, 2008 - 17:38:21
>5: Zafy Albert : […] Eo amin’ny intelligence no critère tena nahatonga azy ho voakilasy fahadimy + No-flashouillén’ny eoropeanina i Samoela ka lasa tsy nanana eritreritra ny hitondra firenena, ary dia i Zafy Albert no lany
:D Mahery r’ise izany “ahitra natoraly” ao an-jaridainanreo izany … tena tiako ilay scenar … sady mampahatsiahy ahy tsianjery fony zahay zatovo tsy tsaroako intsony ny fiantombohany anefa miafara amin’ny hoe :
“Ilay kisoa anefa tsy azo,
fa nandeha nianika hazo “
Monday, November 3, 2008 - 17:43:18
Sssshhh, moramora fandrao gadrain-dry zalahy aho. Tsy mba blaogy mipasoka dômy mantsy aho izao fa efa mitifitra ny antoko lehibe tsindraindray ka sao mahita loza eto… :D
Tuesday, November 4, 2008 - 03:03:32
ity kosa ngamba miditra any@ best of ny post nataon’i toi e.
what if style jentilisa… is en vogue :)
tsy maintsy ho ataoko ;-)
Thursday, November 6, 2008 - 13:44:10
Loool ! Saika tsy nahita an’ito indray ra-pissoa fa laozana miasa be ato ha ha ha.
Hay ny LHC no nahatoa izao antsika.
Ny ahy antony hafa no hanakilasiako an’i Zafy Albera ho faha-5 … :-P
Thursday, November 6, 2008 - 18:35:10
Ary ny filaharan’ny andefimandriny?
Thursday, November 6, 2008 - 18:49:09
Sahala amin’ny tsy manana alàlana hanao fanakilasiana araka ny andefimandriny aho andrao manota amin’ilay hoe “Aza mitsiriritra ny vadin’ny filohanao!”. Satria fa … raha ny vadin-dry zalahy no hokilasiako dia ny vadin’i Mosélemera bandykely no ho voalohany, nefa ilay bandy kely aza tsy filoham-pirenena.
@pissoa: inona no antony hanakilasianao an’i Zafy Albert ho fahadimy?
Suddenly ... Fo mitambatra »
« Raha toa moa ka ... tantara mampalahelo